Accueil Ny Mpitandrina Samihafa Taratasy fisaorana avy amin’ny Mpitandrina Roger Rafanomezantsoa
Misaotra anareo indrindra, tompoko ny amin’ity taratasy nalefanareo ho filazana ny valim-pifidianana sy fiarahabana ahy noho ny nahalany ahy ho Mpitandrina matihanina ao amin’ny FPMA Melun!
Misaotra ny Tompo aho fa Izy no mitondra sy mandamina ny fiainan’ny Fiangonana, ary Izy no nifidy fa fitaovana teo am-pelatanany ihany isika.
Misaotra antsika rehetra TSY AN-KANAVAKA na ny nifidy ahy na ny tsy nifidy ahy fa zanaky ny Fiangonana daholo isika, ka izay lany eo dia ekentsika am-pitiavana, ary hiara-hiasa isika hampandroso ny fifanakatiavana sy ny firaisan-kina eo anivon’ny Fiangonana, fa antoky ny fampandrosoana azy izany.
Indro hitanareo mimpaingotra amin’ity taratasy ity ny taratasy fisaorako tokony ho vakiana ao am-piangonana. Kanefa raha asainareo mba mandalo any aho dia ny tenako mihitsy no hijoro eo anoloan’ny Fiangonana hisaotra azy ireo mivantana.
Dia mirary soa sy manao veloma finaritra ho tahian’ny Tompo!
Tasatasy fisaorana Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA